Maraykanka, 10 September 2017
Axad 10 September 2017
War saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamda Mareykanka ee Africa (AFRICOM) Jimcaha maanta ayaa lagu sheegey in iyadoo iskaashi lala yeelanayo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ciidamada Mareykanka qaadeen weerar xagga cirka ah oo qorsheysanaa, kaas oo lagu beegsaday Al-Shabaab Khamiistii abbaaro 2:45 Duhurnimo xilliga Soomaaliya.
Warbixin:Duufaanada Mareykanka ku Soo Noqnoqda
Duufaanta Hurricane Irma oo watada dabeylo xooggan oo saacaddii ku socda xawaare dhan 280 Killomitir iyo roobab mahiigaan ah ayaa ku dhuftay Jasiirado ku yaala Badda Caribbeanka.
Trump oo Digniin Kale u Jeediyay Pyongyang
Madaxweyne Donald Trump ayaa digniin ku bixiyay in maalin murugo badan ay u noqoneyso Kuuriyada Waqooyi, haddii Mareykanku buu yiri uu talaabo Milatary oo ka dhan ah xukumadda Pyonyoung uu qaado.
Duufaanta Irma oo Garaacday Jaziiradda Puerto Rico
Duufaanta Irma ayaa xalay si xawli ah ku dhaaftay waqooyiga jaziiradda uu Mareykanku leeyahay ee Puerto Rico, iyada oo dhulka dhigtay korntada iyo tubooyinka biyaha qaada taasoo saameyneysa boqollaal kun oo ruux.
Madaxweyne Trump oo Joojiyey Barnaamijkii DACA
Dowladda Mareykanka ayaa soo geba gebeysay barnaamij ka hor-istaagayey caruurta ama dhallinyarada aan sharciga haysan in la masaafuriyo, una ogolaanaey inay ka shaqeystaan waxna ka bartaan Mareykanka.
Mareykanka: Shil ay ku Geeriyootay Gabar Soomaali ah
Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Asli Cabdi Xayir ayaa ku geeriyootay halka wariye Axmed C/raxmaan Jaakat oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dagan Mareykanka uu ku dhaawacmay kadib marki baabuur ay la socdeen uu ku dhacay tareen gudaha magaalada Barron ee gobolka Wisconsin ee dalkaan Mareykanka Sabtidii.
Minnesota: Shirkadaha Soomaalida oo Laga Goystay Qandaraasyo
Shirkado ay leeyihiin qaar ka mida jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobalka Minnesota ayaa qandaraasyo ay ka heysteen shirkadaha caymiska ee Blue Cross Blue Shild iyo U care laga goostay.
Haweeney Soomaali ah oo lagu Dhaawacay Ohio
Mushkilad Soo Food Saartay Soomaalida Columbus
Magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ka mid ah meelaha ay sida aadka ah u dagaan Soomaalida Mareykanka ayaa waxaa bilooyinki ugu danbeeyey ka dilaacay kooxo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo is dilaya.